Tiana Voavison RAZAFITSIALONINA : ny fampandrosoana ao anatin’ny firaisankina sy ny fifampitsinjovana no fanoitra ho an’ny fampandrosoana lovainjafy – Blaogin'i Voniary
Tiana Voavison RAZAFITSIALONINA : ny fampandrosoana ao anatin’ny firaisankina sy ny fifampitsinjovana no fanoitra ho an’ny fampandrosoana lovainjafy
Ho tanterahina ny 12 hatramin’ny 17 Septambra 2016 izao ao amin’ny lapan’ny faritra Matsiatra-Ambony ao Fianarantsoa ny Forum « Economie Sociale et Solidaire » andiany fahatelo eto Madagasikara. Izy io dia hetsika entina ampiroboroboana ireo rafitra mivoy ny fandrosoana ao anatin’ny firaisankina sy ny fifampitsinjovana. Indro ary entina aminao ny tafatafa nifanaovan’i Voniary tamin’ny mpikarakara dia ny filohan’ny fikambanana AFAKA.
Voniary : Iza moa ianareo mpikarakara ity hetsika ity ?
Tiana Voavison RAZAFITSIALONINA : Anisan’ireo hetsika marobe entin’ny fikambanana AFAKA andraisana anjara amin’ny fampandrosoana an’ity Madagasikarantsika ity ny Forum ESS. Ny AFAKA na ASA FA TSY KABARY dia fikambana nasionaly ho an’ny tanora, niorina tamin’ny 2006. Tanjonay indrindra ny fampiroboroboana ny fahaiza-mitantana sy ny famoronana orinasa mba hampihena ny tsy fananan’asa eo amin’ny tanora. Ny «Economie Sociale et Solidaire » no foto-kevitra entinay amin’izany satria io no hitanay fa vahaolana amin’ny fahantrana mianjady eto amintsika.
V : Azonao azavaina misimisy ve ny atao hoe ESS ?
TVR : Ny ESS dia fampandrosoana ao anatin’ny firaisankina sy ny fifampitsinjovana. Maro ny firehan-kevitra ekonomika novoizina teto Madagasikara hatramin’izay niverenan’ny fahaleovan-tena izay : ny nasionalisma ny sosialisma, ny kapitalisma ary ny liberalisma. Tsy nisy nahomby anefa ireo matoa mbola toy izao ny toe-karentsika. Ary ny mampalahelo dia vao mainka mitotongana ny fari-piainan’ny Malagasy. Ezahinay ampahafantarina àry fa misy làlana hafa ho amin’ny fampandrosoana. Izany dia fampandrosoana mitsinjo ny malagasy tsivakivolo : ny tantsaha, ny mpiasa madinika, ny mpivarotra, ny tompona orinasa sy ny sisa. Ary fampandrosoana ao anatin’ny firaisankina satria ny tombontsoan’ny maro no tarigetra.
V : Moa tsy mitovy amin’ireo firehan-kevitra efa noterena ampiharina teto Madagasikara hatrizay ihany ve izany ?
TVR : Tsara fipetraka ny fanontaniana sady rariny sy hitsiny raha hamotopototra toy izany ny malagasy tsirairay. Ny firaisankina dia tsy foto-kevitra noforonina fa ao anatin’ny soatoavina Malagasy. Efa niainana teo amin’ny fiarahamonina malagasy hatrizay ny fifandrombonana amin’ny asa saritra sy ny asa vadidrano, ny atero ka alao, ny valin-tànana, ny tambirô sy ny hafa. Ireny no nahavitana ny asa an-tanimbary sy ny tao-trano. Hoy ny ohabolan-drazantsika hoe « Ny firainsankina no hery » ka izany no ilaina ampiharina eo amin’ny fampandrosoana. Ny fifampitsinjovana indray dia ohatra akaiky no alaiko. 80% ny Malagasy dia tantsaha nefa ireo no mahantra indrindra satria ny mpanangom-bokatra dia maka ny valin-kasasarany amin’ny vidiny mirary. Ireto farany ireto ihany anefa no mivarotra ireo vokatra amin’ny vidiny midangana izay tsy izy. Vokany, izy ireo manangon-karena fa ny mpamboly mitrongy vao homana. Izany no ezahina amboarina amin’ny ESS.
V : Inona ary ity forum ESS ity ?
TVR : Io no ambohipihaona ho an’ireo mpisehatra rehetra amin’ny ESS eto Madagasikara. Amam-polony maro ny trano eva ho hita ao. Hampiranty ny mombamomba azy sy ny asany ao ny fikambanana, ny tetikasa momban’ny « tourisme solidaire et equitable », ny onjam-peo iombonana, ny « mutuelle de santé », ny fampindramam-bola madinika sy ny maro hafa. Hisy koa ny famelabelaran-kevitra sy lohabary an-dasy maro entin’ireo manana traikefa eo amin’ity sehatra ity toy ny andrim-panjakana, ny manam-pahaizana manokana, ny koperativa, vondron’olona ifotony sy ny maro hafa koa. Hodinihina manokana amin’ity andiany fahatelo’ny Forum ESS ity moa ny tanjon’ny fampandrosoana lovainjafy.
V : Hafatra ho an’ny mpamaky ?
TVR : Tongava fa tsy hanenina velively ianao satria fampandrosoana an’i Madagasikara no katsahintsika ao ao anatin’ny fiombonana. Any Fianarantsoa amin’ny 12 hatramin’ny 16 Septambra izao ary ny fotoanantsika. Aza misalasala mitsidika ny pejy Facebook : AFAKA – Asa FA tsy KAbary » – Tonga dia action – mba ahazoanao fanazavana fanampiny.
Economie Sociale et solidaire, fampandrosoana, Fampandrosoana lovainjafy, fandrosoana, Firaisankina, Forum Malagasy ESS 2016
REHEFA ANY AMBANIVOHITRA (TAPANY III)
2 commentaires sur “Tiana Voavison RAZAFITSIALONINA : ny fampandrosoana ao anatin’ny firaisankina sy ny fifampitsinjovana no fanoitra ho an’ny fampandrosoana lovainjafy”
29 janvier 2019 à 17 h 43 min
Misaotra mizara sy manaparitaka ny momban’ny « Fampandrosoana Lovainjafy »
31 janvier 2019 à 5 h 18 min
Mankasitraka anao manaraka ny Blaogin’i Voniary! Tena mahaliana ihany koa ilay boky nosoratanao!